Mmiri manga: ihe ọ bụ, otu esi akpụ ya na mmetụta ya | Netwọk Mgbasa Ozi
Portillo nke German | | Ihe gbasara ihu igwe
Mgbe anyị na-ekwu maka oke mmiri ozuzo, ụdị ihe ịtụnanya ihu igwe nke nwere nnukwu ikike mbibi na-abata n'uche mgbe niile. Otu n'ime ụdị ya bụ uwe mmiri. A makwaara ya site na aha mmiri mmiri. Ọ bụ ihe omimi ihu igwe nke ọdịdị ya na-ahụ ma yie igwe ojii nke na-eme ka ndụ ma na-agbaghari ngwa ngwa. Ọ dịka oke mmiri na-ebugharị mana ọ na-eme n’elu oke osimiri.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe aka uwe mmiri bụ, otu esi emepụta ya na mmetụta ọ nwere.
1 Kedu ihe bụ mmiri mmiri
2 Etu esi edozi aka mmiri
3 Isi atụmatụ
Kedu ihe bụ mmiri mmiri
Mgbe enwere nnukwu nsogbu ikuku na ikuku mmiri na-eme na oke ikuku, anyị nwere ihe a maara dị ka aka mmiri. Ma ọ bụ na ọ bụ ihe ikuku nke ikuku nke enwere ike ịmata dị ka igwe ojii nke nwere ọdịdị foneelu na ọ na-agbagharị ngwa ngwa. Nke a onu na-agbadata igwe-oji cumulus gbadoro n’elu oke osimiri ọ na-emekwa ka ọ na-ala elu ruo n'ịdị elu. Maka nke a, akpọrọ ya aka mmiri ma ọ bụ mmiri mmiri.
Site na nkọwa anyị na-ekwu maka oke ikuku na ọnọdụ ihu igwe ahụ nke na-eme na ala ma na-ebute nsonaazụ na-agbawa obi na ebe ọ gafere. N’okwu a, mgbe ị gafere n’elu oke osimiri a gbanwere aha a ka ọ bụrụ manga mmiri. Uwe mmiri nwekwara ike ịghọ oke mmiri ozuzo ma ọ bụrụ na ọ kwụsịrị ịkụ ala. Nọmalị mgbe nke a mere, oke mmiri ozuzo na-efusi ike ma na-apụ n'anya. Ọ bụrụ na anyị enyochaa aka mmiri ahụ dabere na nsonaazụ ọjọọ ọ nwere ike ibute na ngwongwo ma ọ bụ nke ndị mmadụ, anyị ga-amararịrị na mmetụta ịhụnanya ya pere mpe.
N'adịghị ka oké ifufe mmiri, mmiri mmiri na-apụta n'oké osimiri. Nke a na - eme ka ọghọm nke mbibi belata karịa. O nwere ike imetụta ụfọdụ ụgbọ mmiri na-aga n'oké osimiri ma ọ bụ na-egbu azụ. Ke Spain anyị na-emekarị na-ahụ nke a ụdị Oke ihe omimi nke ihu igwe na mpaghara Catalonia, obodo Valencian, Balearic Islands, na Canaries na n’ebe ọwụwa anyanwụ Oké Osimiri Cantabrian. Ọ bụ ezie na ime ihe ike nke ihe omume ndị a adịghị oke elu, o zuru oke ịghọ nnukwu ihe egwu maka ma ịkụ azụ ma ụgbọ mmiri na-atụrụ ndụ.
Etu esi edozi aka mmiri
Enwere otutu ihe omumu nke nyochaworo uzo aka mmiri si amalite. Nchikota nke ihe omumu ekpughere na ihe omuma ndi a na eme site na uzo ise di iche. Anyị ga-enyocha nke ọ bụla n'ụzọ na mmalite nke aka uwe mmiri:
Oge 1: ntụpọ gbara ọchịchịrị. N'oge a, ụdị ọchịchịrị diski gbara ọchịchịrị nke na-acha oji n'elu mmiri. Eziokwu ahụ na nsị a nwere ike ịdị na-egosi na enwere kọlụm ikuku n'otu ebe ahụ. N'oge a, obere igwe ojii nwere ọdịdị ma ọ bụ ọgaghị adị.
Adọ 2: gburugburu. N’oge a, a ga-eji ụdọ na-adị gburugburu ebe ojii ahụ ekwuru na mbụ. Ndị agha ndị a na-anọ n'etiti ibe ha n'etiti agba na agba ọchịchịrị.
Oge nke atọ: ụfụfụ ụfụfụ. N'ebe gbara ọchịchịrị na mbido, ụdị ajọ ifufe nke ụfụfụ ga-amalite ịmalite site na mmiri nke ifufe buliri. N'otu oge nke a mere ma ọ bụ mmepe vetikal nke olulu mmiri a maara site na tuba.
Oge nke anọ: ntozu okè. Ihe mgbanaka nke etolite nke ụfụfụ na tuba ahụ ruru ogo kachasị ogologo na ogologo ya na nnukwu dayameta. Ọ bụ ebe a ka anyị hụrụ oke ihu igwe n’ịma mma ya kacha mma.
Nkeji 5: mgbasa. Nke a na-emekarị ọtụtụ ugboro na mberede. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na otu ma ọ bụ karịa n'ime ọnọdụ ndị na-eme ka aka mmiri na-arụ ọrụ kwụsị. Ọtụtụ oge ọ na - eme na mmiri ozuzo nke dị nso na ihe omimi ihu igwe a kwuru na mmiri mmiri ma na - eme ka mmiri oyi na - agbadata ịmalite ihe ahụ. Ofdị mgbasa ọzọ bụ na mmiri mmiri na-abanye n'ala ahụ na n'ihi ike mgbagha na mgbanwe nke njupụta ọ na-agwụ ike ruo mgbe ọ ga-apụ n'anya.
Anyị nwere ike ịsị na ọ dịghị mmiri mmiri dị ka nke ọzọ. Ọ bụ eziokwu na enwere ike ịkọwa ya dịka ọrụ onye ọ bụla na-arụ ma ọ bụ na-adịchaghị njọ. N'ụzọ nke a, a na-ekewa ha dị ka uwe elu mmiri na-adịghị adọrọ adọrọ na uwe na-enweghị aka. Nke ọ bụla n'ime ụdị uwe mmiri abụọ a nwere àgwà ya. Anyị ga-enyocha nke ọ bụla n'ime ha.
Uwe a na-eji mmiri na-ebugharị bụ ihe a na-eche na usoro nhazi ka nke yiri oke ikuku. Naanị ihe dị iche bụ na ihe omume ahụ na-eme n'oké osimiri na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na elu ụwa. Enwere ụfọdụ ọmụmụ nke a na-anwa iji dochie okwu okwu ahụ bụ nke metụtara ya na oké ifufe ebe ọ bụ na o dochaghị anya na usoro nhazi nke ihu igwe a chọrọ ịdị adị nke ike dị elu dị ka ọ dị n'ihe banyere ot tonado.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere aka mmiri na-enweghị akwa. Typedị ụdị aka mmiri a bụ nke kachasịkarị n'ụsọ oke osimiri nke Iberian Peninsula. Ejikọtara usoro ya na ngwakọta nke ikuku windo na-eme na ọkwa mmiri.. A na-agwakọta ihe mkpuchi a na okpomọkụ dị elu nke oke osimiri nke na-emepụta ọnọdụ ndị a na-akwado ịdị adị nke aka mmiri. N’akụkụ mmiri anyị, e nwere ọtụtụ mmiri radieshon nke na-eme ka oke osimiri kpoo ọkụ ngwa ngwa karịa oge. Mmata nke oké osimiri na-ewere nwayọ nwayọ n'ihi oke radieshon a. Maka nke a, a na - ewerekarị ụdị mmiri dị n'ụsọ mmiri anyị.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe gbasara ihu igwe nke mmiri mmiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Uwe mmiri
Kpakpando nile nke Circupolar